Microsoft Office waa mid ka mid ah dhufto ee ugu fiican in mar uun la abuuray shirkadda iyo hadda isticmaala noolaan karaan iyagoo aan gaymamka, laakiin madal sida ay bixiso taageero ururinta, abaabulka iyo kalasooca xog aad u muhiim u ah shirkadaha waaweyn iyo ururada aan. Madal Tani waxa ay sidoo kale la bilaabay gudahood daaqadaha 10-dhexgalka laakiin wali waxa jira jahawareer ku saabsan version iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in shirkadda arrintan la xiriira ayaa xaqiijiyey in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in dadka isticmaala markuu u waa u imanayaa inuu degsado iyo ku rakibidda barnaamijka on versions kale daaqadaha iyo sidoo. Madal waa kaliya la socon daaqadaha 10 oo sidaas daraaddeed isku day lahayn waa in la sameeyaa si loo hubiyo in ay la soo bixi oo lagu rakibay u version kasta oo kale oo ka mid ah daaqadaha si aad u hesho shaqada sameeyo fasalka iyo tayada. Xafiiska ee Windows 10 oo keliya kuma yeelan doono u habeyn buuxda, laakiin sidoo kale waa in la ogaadaa in la soo saaro inta badan ku salaysan-celin ah ee dadka isticmaala iyo ka dib rakibo si qaababka kale ee isticmaala mar walba loo baahan yahay ayaa lagu daray barnaamijka si ay u sameeyaan hubiyo in user la wada cafiyo oo uu helo ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah natiijada tahay in arrintan la xiriira. Isticmaalka lagu sameeyey fudud u isticmaala laylis. Taageerada online sidoo kale waxaa jira si loo hubiyo in dadka isticmaala ay marnaba keligay baa hadhay, oo waxay aad u hesho caawimo iyo marka loo baahdo. Tutorial ayaa hubin doona in 7 waxyaalaha ugu dambeeyay in user ah waa in la ogaado oo ku saabsan Xafiiska ee Windows 10 oo aan shaaca ka qaaday oo kaliya laakiin waxa ay soo bandhigay hab in waxa uu noqonayaa mid si fudud loogu user ay u fahmaan iyo fulintooda aan arin kasta oo dhibaatada. Waxaa jira boqolaal videos demo in lagu abuuray in arrintan la xiriira iyo user waa in la hubiyo in YouTube waa la heli si aad u daawato videos, kuwaas oo si aad u hesho fikradaha ee buuxa sameeyo.
Qeybta 1: Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan daaqadaha 10
Qeybta 2: Talo & Tricks isticmaalka xafiiska on Windows 10
Marka ay timaado in su'aasha sakhiray ka dibna mar kale madmadowga weli sida shirkaddu ay ku xaqiijisay in qaababka aan shaaca ka qaaday in ay ka buuxaan jidaynayey user si aad u hesho gobolka ee shaqada farshaxanka sameeyo oo aan wax arrintan iyo dhibaatada. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in muuqaalada in halkan lagu soo bandhigay waa kuwa guud oo ay yihiin oo kaliya lagu soo bandhigay si loo xaqiijiyo in samayso in waxa Microsoft ayaa dukaanka ee isticmaala Office ee la xiriirta Windows 10.
1. Windows 10 wuxu iska leeyahay version xafiiska
Si ka duwan OS hore ayaa la abuuray shirkadda ay tahay in la xuso in user waa in la hubiyo in 10 Windows ku leeyahay version gaarka ah ee xafiiska oo aan la soo qaatay wax kasta oo kale oo OS sida wax xafiiska 2007 ama 2010. Tani version gaar ah la Timaadda xaqiiqada ah in user noqon doontaa si aan kala soo bixi xafiiska nuqul ka mid ah Kulanka Xiisaha farsamo si loo hubiyo in uu goobaha aan la xukumay oo kaliya laakiin loo isticmaalo si loo hubiyo in ugu fiican ayaa u dhiibay oo aan wax arrintan iyo dhibaatada ay awoodaan:
2. Waxaa keliya oo la jaan qaada Windows 10
Tani waxay sidoo kale waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan waa in la ogaadaa by user si aad u hubiso in ay marnaba isku dayaan in ay soo baxdo iyo rakibi barnaamijka on versions daaqadaha kale lagu soo diyaariyay hore. Dhibic Tani waxay sidoo kale waa inuu xaqiijiyo in halista ah ee shirkadda la xukumo marka ay timaado version ugu dambeeya ee daaqadaha sida Hadalkoodii. Sidoo kale waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican ee lagugu leeyahay xaqiiqada ah in user awood u yeelan doonaan in la hubiyo in arrimaha iyo cayayaanka go'an yihiin gudahood OS la mid ah oo aan taageero dibadda iyo waa hubaal in shirkadda ay sameysey hubiyo in dhammaan taageerada lagama maarmaanka ah waa lagu daray si loo xaliyo arrinta u user.
3. muuqaalada New daray
Waa wax fiican oo hore users xafiiska in la ogaado in xeerka jir ah ayaa la isticmaali in la hubiyo in xafiiska loo abuuray oo la mid ah qaababka la socoto si user waxaa lagu cafiyo arrintan la xiriira, laakiin waxaa jira qaababka badan oo kale oo ku user ma awoodi doonaan in ay helaan gudahood qoraalkii hore oo taas daraaddeed waxaa la talinayaa si loo hubiyo in dhammaan qaababka yihiin sahamiyey olole daaqadaha 10 si loo hubiyo in waayo-aragnimo guud ayaa kobci
4. Waa lacag la'aan ah
Iyada oo la bilaabay ee Windows 10 kombuyuutar oo ah in la horumariyo lahaa OS isku sidoo kale hubin doona in Xafiiska Windows 10, hore ayaa lagu daray iyaga gudahooda si loo hubiyo in user Khasab ma aha in waxa ay tahay iyo wax kale oo user a download waa in ay hubiyaan in arrintan la xiriira waa in codsiga sidoo kale waxaa lagala soo bixi karaa iyo lagu rakibay dukaanka app daaqadaha iyo waxaa sidoo kale waa lacag la'aan laakiin user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in lambarka xafiiska 365 waxaa iibsaday in lagu furo muuqaalada qaar ka mid ah barnaamijka :
5. Mid ka mid drive-dhexgalka
User ayaa sameyn doonta hubiyo in drive ka mid ah waxaa loo isticmaalaa in ka badan marka la barbar dhigo meel kale lagu kaydiyo sida code ayaa loo qoray si ay u hubiyaan in dukumentiyada ay ku kaydsan yihiin drive ka mid ah halkii meel kasta oo kale oo si user waa inay awoodaan inay helaan oo dhan oo iyaga ka mid ka mid ah goobta kaliya. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in sidoo kale la hubiyo in haddii dukumentiyada waa in la dhaqaajiyo waxaa la sameeyaa si cad si loo hubiyo in mid ka mid Drive waa sida meel lagu kaydiyo default dukumenti gaar ah wax aan la isticmaalin.
6. Desktop version iyo version Universal
Si ka duwan qoraalkii xafiiska hore waa in la ogaadaa in daaqadaha 10 yeelan doontaa laba nooc oo Office in lahaa timaaddo version desktop ie iyo version caalamiga. Wixii user a laylis iyo luuqad fudud codsiyada universal waa cross madal oo waa la heli karo qalabka la taabto iyo marka ay timaado version desktop markaas waa arrin horay loo midaysan gudahood OS iyo waxa loo isticmaali karaa oo keliya marka OS ayaa lagu rakibay gal nidaamka.
Last mid: Dissimilarities
Inkastoo code isku mid ah ayaa loo isticmaali jiray in arrintan la xiriira, laakiin user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in khilaafaadka ka jira sidoo kale waxaa. Tusaale ahaan erayga in la sameeyey iyada oo 10 Windows xafiiska waa wax la soo saaro si loo hubiyo in ay leeg- reading waa sidoo kale waxaa jira si ay u taageeraan hawlaha isticmaala. PowerPoint waxay leedahay kala guurka iyo ugu muhiimsan user awood u yeelan doonaan in ay isticmaalaan oo dhan addons in ay diyaar u yihiin xafiiska codsiga iPad.
Waa kuwan qaar kamid Talooyin iyo tabaha in aad hubiso in isticmaalka isitcmaalo Suite 2016 Xafiiska la sameeyo hab wanaagsan ee ka dhigi lahaa:
Xafiiska on feature baahida ayaa lagu daray gudahood Suite Xafiiska 2016 iyo user inay hubiyaan in ID Microsoft waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in Xafiiska 2016 waxaa huleeshay guud ahaan qalabka kala duwan u samayn karaan.
Under tab warqadda ku user ku riixi kartaa fursadaha sawirada online si ay u hubiyaan in sawirada laga warbaahinta madal bulshada sida Facebook iyo Twitter la geliyo dokumentiga fudayd.
Version Universal ee xafiiska waxaa lagu isticmaali karaa oo la Asakrtii karaa iyadoo la kaashanayo labada farood ee qalab screen taabashada sida kaliya ee android ama macruufka.
Waxaad u baahan tahay ka hor Windows 10 Mobile Hagaaji
7 siyaabo lagu dhiso windows media player
Top 10 Windows 10 mawduucyada for Windows 8
U dayactir Khaladaadka Screen Windows XP Black
Sidee inuu ka soo kabsado Windows XP ka keydsho
> Resource > Windows > 7 Waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan Windows 10 Office